Hongwang vy tsy miova | mpanamboatra sinoa vy mangatsiaka mihodina
Coil Stainless Steel miloko
Taratasy vy tsy miova
Coil Stainless vy
Izahay no orinasa mpifaninana mangatsiaka mangatsiaka indrindra any Shina, ny orinasanay dia ny sehatra varotra matihanina manondrana sy manondrana ny varotra Hongwang Group mampiditra varotra iraisam-pirenena, fitehirizana, fanodinana ary serivisy aorian'ny fivarotana.
Izy io koa dia mitana andraikitra lehibe amin'ny varotra iraisampirenena vokatra avo lenta novokarin'ny tobim-pamokarana lehibe ao amin'ny vondrona.
inona no azontsika atao?
Ny vokatray fototra dia ny coil vy tsy misy hatak'andro sy ny ravina 200, 300, 400, famaranana ny coil sy ny lovia manontolo. Ny sakany dia manarona 510-750mm, sy 1240mm, ary ny hateviny eo anelanelan'ny 0.28mm sy 3.0mm. Ny famaranana dia misy ny NO.1, 2E, 2B, 2BB, BA, poloney manjavozavo, 8K, fitaratra ti-gold, volamena rose, black ti-gold, vibration, copper, AFP, sns. Mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa manokana, izahay manome 2BQ namboarina (fitaovana fanaovana stamping), 2BK (fitaovana fanodinana 8K) ary fitaovana manokana hafa. Ny orinasa koa dia afaka manome ny fanapahana, fikorisana, fandrakofana horonantsary ary fanohanana ny serivisy amin'ny varotra fanafarana sy fanondranana.
Factory Direct hatramin'ny taona 2003
Didy kely azo ekena
ekipa fivarotana matihanina
Vokatra hongwang isan-karazany ho safidinao
HL + Gold
Mirror + Gold
HL + Rose volamena
Volavola vita amin'ny vy tsy misy fangarony
Takelaka vy tsy voatanisa
Mahaiza ny fampahalalana sy torolàlana momba ny indostria farany
21 / F, Block 1, Jinchang International Metal Trading Market, Chencun, Shunde, Foshan, Guangdong, Sina
© Copyright - 2010-2017: Voatahiry ny Zo rehetra. Hery Byhongwangst stainless.com